(၆၈)ကြိမ်မြောက် အကယ်ဒမီပေးပွဲကြီး ကျင်းပမယ့် အချိန်နဲ့နေရာ ထွက်ရှိလာ
ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်တစားစောင့်မျှော်နေတဲ့ (၆၈)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲကြီး အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အချိန်နဲ့ နေရာ အတိအကျ ထွက်ရှိလာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ (၆၈)ကြိမ်မြောက် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲကြီးကိုတော့ ပြည်သူရင်ပြင်တွင်(၂၀၂၀)ခုနှစ် မတ်လ(၂၉)ရက်နေ့မှာ Bella Cosmetic မှာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေရဲ့ ပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲကြီးကတော့ မကြာမီကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာမို့ ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေကတော့ စိတ်လှုပ်ရှားနေကြမှာအမှန်ပါ။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲကြီးကိုတော့ (၁၉၅၂)ခုနှစ်ထဲကစတင် ကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်မှာတော့ (၆၈)ကြိမ်မြောက်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ ဒီနှစ်မှာတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းကြီးတွေများပြီး အနုပညာရှင်တွေ အပြိုင်အဆိုင် လက်စွမ်းပြမှုကြောင့် ပရိသတ်တွေတောင် ဝေခွဲရခက်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်တစားစောင့်မျှော်နေတဲ့ (၆၈)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲကြီး အခမ်းအနားကိုတော့ ပြည်သူရင်ပြင်တွင်(၂၀၂၀)ခုနှစ် မတ်လ(၂၉)ရက်နေ့မှာကျင်းပဲပြလုပ်သွားမှာတဲ့နော်။ ဘယ်အနုပညာရှင်တွေက ထူးချွန်ဆုတွေရရှိသွားမလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စရာပါပဲနော်။ Source: Tin Tunn Win, John Lwin , […]
စပွန်ဆာမ ရှိ လို့ သမီးလေး အကယ်ဒမီရွှေကြိုမှာမပါလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေ တဲ့ ဟာသ လူရွှင်တော် အောင်သော်ပြောလာ တဲ့ video
ကဲ့ ဖြစ်သင့် ရဲ့လား ပရိသတ်တို့ ရွှေကြို စကာတင် ၈၀ စာရင်းမပါသူတစ်ယောက်က စကာတင် ၅၀ စာရင်းပါလာတယ်ဆိုတော့။ ဆိုး တာက ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကလုပ်မဲ့ အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲ မြန်မာ ရုပ်ရှင်ရဲ့ အမြှင့်ဆုံးသော ဆု ပေးအပ်ပွဲအတွက် ပွဲစီစဉ်သူတွေက မျက်နှာလွှဲခဲပြစ် အစည်းအရုံးကတောင် မသိရအောင် ရွှေကြို ရွေးချယ်မှုကို လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့။ သက်သေနဲ့ အခိုင်အမာနဲ့ ထောက်ပြပေးတဲ့ ကိုအောင်သော်ကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ပေါကားများ ရိုက်နေသော မြန်မာ ရုပ်ရှင်မှသည် မသမာမှုဆိုသည်ထက် အရှက်မရှိ စကာတင် (၈၀) စာရင်းမပါသူက စကာတင် (၅၀) စာရင်းဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ ဘာလည်းဆိုတာသာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ အားလုံးသော သတင်းချစ်သူ ပရိသတ်များလည်း အများသိအောင် မျှဝေပေးကြပါအုံးလို့ …. video… […]
မျက်ကြည်လွှာနဲ့ Dead Bodyကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ရွှေပိုးအိမ်
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေး ရွှေပိုးအိမ်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ မွေးနေ့လေးတုန်းက မွေးနေ့အလှူအနေနဲ့ “ပြည်ထောင်စု သမ္မတနိုင်ငံတော်အစိုးရ ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာန ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းမြစ်ဦးစီးဌာန ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်”မှာ သေဆုံးပြီးနောက် ကျန်ရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆေးပညာအကျိုးအတွက် သင်ကြားရေးကိစ္စရပ်များတွင် အသုံးပြုရန် သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ရွှေပိုးအိမ်ကတော့ သေဆုံးပြီးနောက် ကျန်ရှိခဲ့တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို လှူဒါန်းတဲ့အလှူလေးအပြင် မျက်ကြည်လွှာကိုလည်း လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ရွှေပိုးအိမ်နဲ့အတူ သူ့ကို အားပေးပြီး ချစ်ခင်ကြတဲ့ အမာခံပရိသတ်တချို့ကလည်း မျက်ကြည်လွှာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှူလေးကို အတူတကွ လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။ အခုလို အလှူပြုလုပ်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကို ရွှေပိုးအိမ်က သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ “လွန်ခဲ့တဲ့ မွေးနေ့က မျက်ကြည်လွှာရယ် dead body ရယ်ကို We love တွေရော ရွှေပိုးပါလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်” ဆိုပြီး ဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ […]
“Plane From Wuhan ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ဖို့ စိတ်ကူးနေတဲ့ ကျော်ကျော်ဗိုလ်”
ကျော်ကျော်ဗိုလ်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်အရည်အချင်းမှာသာမက သဘင်လောကနဲ့ မစိမ်းတဲ့အပြင် ဟာသညဏ်ရွှင်သူ ဖြစ်တာမို့ နှင်းဆီအငြိမ့်များတွင်လည်း ပင်တိုင်လူရွှင်တော်တစ်ယောက် အဖြစ် ပရိသတ်ရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်ကျော်ဗိုလ်က လတ်တလောမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဝူဟန် ရောဂါဆိုးကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟာသလေးနှောက သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နာထက်ကနေ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ “Train to Busan လိုမျိုး Plane From Wuhan ဆိုပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ရမယ်” လို့ အရွှန်းဖောက်ကာစနောက်ဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ “Train to Busan” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာဆိုရင် ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကားဖြစ်ပြီး အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများအထိပါအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ “Train to Busan”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုတော့ ပရိသတ်တွေတော်တော်များများလည်း ကြည့်ရှုခဲ့ဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။CeleGabar ပရိသတ်ကြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ “Train To […]
အဆိုတော်ချယ်ရီသင်းရဲ့သီချင်းကိုသီဆိုမှုကြောင့်နာမည်ကြီးနေတဲ့ဇနီးမောင်နှံကို(19)လမ်းမှာသီချင်းအတူတွဲဆိုရင်းကိုယ်တိုင်အလှုူခံပေးခဲ့တဲ့ချယ်ရီသင်း … ပီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကမှ အဆိုတော်ချယ်ရီသင်းရဲ့ သီချင်းနဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ချင် သီချင်းလေးသီဆိုခဲ့တဲ့ မျက်မမြင် အစ်မကြီးတစ်ယောက်ဟာဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ အသံပါဝါ ဆိုပုံဆိုဟန်တွေကောင်းလွန်းတာကြောင့် လူအများစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝထင်မထားရလောက်အောင်ကို သူသီဆိုသွားတာက ကောင်းလွန်းပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အခုအခါမှာတော့ အဆိုတော် ချယ်ရီသင်နဲ့ အတူတွဲသီဆိုလာခဲ့ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ချယ်ရီသင်းရဲ့ မသန်စွမ်းသူများအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကလည်းလေးစားစရာ။ အောင်မြင်နေတယ်ဆိုပီး မော်ကြွားချင်းမရှိပဲ သူမသီချင်းကို အတူသီဆိုကာ မသန်စွမ်းအစ်မကြီးအတွက် အလှူခံပေးခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း လှူဒါန်ကြတာတွေ့ရလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းမှာ အားနည်းသူကိုဖေးမကူညီတာဟာ အင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ထားဖြစ်ပီး ဂုဏ်ယူစရာလည်းကောင်းပါတယ်။ ကဲ ပရိတ်သတ်ကြီးရော ချယ်ရီသင်းတို့အတူသီဆိုထားတဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ချင်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို နားဆင်ကြည့်လိုက်ပါအုံးနော်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အခုလိုအားနည်းတဲ့သူတွေတွေ့ရင်လည်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။#သာဂိ Share this: Related
ဖြူဖြူထွေးဟာ အက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် မင်းသားဂျွန်ဂို ကိုအရမ်းအားပေးခဲ့တာပါတဲ့။ သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း မကြာခင် အက်ရှင် ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးကတော့ မကြာခင်မှာ ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်တော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ အက်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ အတွက် တော်တော် ကြိုးစားရမယ်လို့ အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ “ ၃ လပိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ကား ရိုက်ဖြစ်မယ်။ ဇာတ်ကားကတော့ တော်တော်ကြမ်းတယ်လို့ပြောတယ်။ ရိုက်မယ့် ဒါရိုက်တာကြီးကလည်း အကြီးကြီးပေါ့နော်။ အဲဒီအတွက်လည်း အရမ်းရင်ခုန် နေပါတယ်။ လောလောဆယ် စရံပဲရပါသေးတယ်၊ ဇာတ်ညွှန်းမဖတ်ရသေးဘူး။ ပါဝင်ရမယ့် ကာရိုက်တာကတော့ ကိုယ်နဲ့ လုံးဝမလိုက်တဲ့ ကာရိုက်တာမျိုးလေ ကြိုးစားရမှာပေါ့” ဆိုပြီးတော့ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့က ရွှေပြည်နန်းပွဲကို တက်ရောက်ရင်း ဖြေဆိုခဲ့တာပါ။ အက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် သရုပ်ဆောင်ဂျွန်ဂို က အရမ်းအားပေးခဲ့တယ်လို့ ဖြူဖြူထွေးက […]
မေသန်းနုရဲ့မွေးနေ့မှာ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဇင်ယော်မောင်မောင်
ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီလ(၂၇)ရက်နေ့လေးကတော့ မေသန်းနုရဲ့(၅၉)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မေသန်းနုကတော့ ဟိုးအရင်အချိန်တွေကတည်းက အောင်မြင်တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုရလဒ်အနေနဲ့အကယ်ဒမီဆုကြီး ငါးဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူချစ်မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်လာခဲ့ပေမယ့် မကြာသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတစ်ခုကြောင့် ရန်ကင်းတရားရုံးကနေ ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကတော့ များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်သူ ဇင်ယော်မောင်မောင်နဲ့ သားလေးမင်းသန့်မောင်မောင်တို့ကတော့ သားလေးရဲ့ပထမဆုံးပွဲဦးထွက်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ တိမ်တွေပေါ်ကပန်း ဇာတ်ကား စင်ကာပူမှာရုံတင်ပြသနေတာမို့ စင်ကာပူကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ မေသန်းနုမွေးနေ့မှာတော့ ဇင်ယော်မောင်မောင်က စင်ကာပူကနေပြီးတော့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “Happy Birthday မ ဆင့် !ဒီနေ့ဒီအချိန်ကစပြီး အခက်အခဲတွေ.. အကျပ်အတည်းတွေ ကျော်လွှား နိုင်ပါစေ.. ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ရင်း အပြစ်တွေ ကျေပါစေ.. လွတ်မြောက်ပါစေ.. ချစ်လှစွာ သော သားရဲ့ အမေတစ်ယောက်အတွက် တောင်းဆုပြုပါသည်.. ဒီဆုကိုတော့ အလွန်မင်းဆုတောင်း ပြည့်လိုပါသည် .. ဘုရားရှင်ထံတောင်းဆုပြုပါသည်” […]
အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကို ရလိုက်ပြီဆိုတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
သဲလို့ ပရိသတ်တွေချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ အကယ်ဒမီရွှေကြိုကနေတစ်ဆင့် ဦးခင်လှိုင်ရဲ့သမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေအသိမှတ်ပြုအားပေးခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။အနေအထိုင်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး ရိုးအေးတာကလည်း သဇင်ထူးမြင့်ကိုပရိသတ်တွေ အချစ်ပိုစေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့အနုပညာအလုပ်တွေဖြစ်တဲ့ ကြော်ငြာရိုက်ကူးရေးတွေ၊ သီချင်းဗွီဒီယိုတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင် ဒီထက်အနုပညာအလုပ်တွေပိုမိုလုပ်ရနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် သူ့ရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲ အတွေ့အကြုံအနေနဲ့ ဆုံစည်းခွင့် ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိထားပါသေးတယ်။ တစ်စထက်တစ်စ အနုပညာအလုပ်တွေပိုမိုလုပ်ကိုင်လာတဲ့ သဲကတော့ “(၂၀၂၀)ကလည်း အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သဲအတွက် ကံကောင်းတဲ့နှစ်လေးဖြစ်လာပါပြီ… ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်… Hearties လေးတွေအတွက် Surprise ပါ…ဘာလေးလဲ ဆိုတာကတော့” ဆိုပြီး ပဟေဠိဖွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သဲရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးခွင့်ရတော့မှာလားဆိုပြီးတော့ ထင်ကြေးပေးခန့်မှန်းမှုတချို့ မှတ်ချက်ပေးရေးသားခဲ့တာပါ။ကြိုးစားမှုကြောင့် အချိန်တိုအတွင်းမှာ နေရာတစ်ခုရလာတဲ့ သဲကို ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားထက်မှာမြင်ရတော့မလားဆိုတာကတော့ ပရိသတ်ကြီးခန့်မှန်းကြည့်ကြပါဦးနော်…. Unicode သဲလို့ ပရိသတ်တွေချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ အကယ်ဒမီရွှေကြိုကနေတစ်ဆင့် ဦးခင်လှိုင်ရဲ့သမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ […]